Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IiMfuno eziTsha zesitofu saseKhanada
URhulumente waseKhanada uzibophelele ekugcineni icandelo lethu lezothutho, kuquka abasebenzi kunye nabahambi bekhuselekile kwaye bekhuselekile. Ugonyo ngowona mgca ubalaseleyo wokuzikhusela kwi-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo. Yiyo loo nto abasebenzi kunye nabahambi kumacandelo omoya kunye noololiwe alawulwa ngumanyano kuya kufuneka ukuba bagonyelwe i-COVID-19.
Iimfuno ziqala ukusebenza nge-30 ka-Okthobha
Njengoko uRhulumente waseCanada wabhengeza nge-13 ka-Agasti, abahambi kumacandelo omoya kunye noololiwe alawulwa ngumanyano kuya kufuneka ukuba bagonyelwe i-COVID-19. Emva kothethwano olubanzi, i-Transport Canada ikhuphe imiyalelo yokugqibela kunye nesikhokelo kwiinqwelomoya kunye nomzila kaloliwe ukuphumeza iimfuno zogonyo kubahambi ezisebenza nge-3 AM (EDT) ngo-Oktobha 30, 2021. Iimfuno zogonyo ziya kusebenza kubo bonke abahambi abaneminyaka eyi-12 ubudala kunye iinyanga ezine aba:
• Abakhweli bomoya ababhabha ngenqwelo moya yasekhaya, enqumla imida, okanye yamazwe ngamazwe ephuma kwizikhululo zeenqwelomoya ezithile eKhanada; kwaye
• Abakhweli bakaloliwe koololiwe iVIA Rail kunye noololiwe baseRocky Mountaineer.
Abahambi kuya kufuneka babonise iinqwelomoya kunye noololiwe ubungqina bokugonywa. Ngexesha lotshintsho olufutshane ukuya kutsho ngoNovemba 29, 2021, abahambi banokukhetha ukubonisa ubungqina bovavanyo olusebenzayo lwe-COVID-19 yemolekyuli ukuze bakhwele. Iinkampani zeenqwelomoya kunye noololiwe baya kuba noxanduva lokuqinisekisa imeko yokugonywa kwabahambi. Kwimo yendiza, i-Canadian Air Transport Authority (CATSA) iya kuxhasa nabaqhubi ngokuqinisekisa isimo sokugonywa.
Kuya kuba mbalwa kakhulu okwahlukileyo kwiimeko ezingxamisekileyo kunye neendawo zokuhlala ezikhethekileyo zoluntu oluchongiweyo olukude ukuze abahlali baqhubeke nokufikelela kwiinkonzo ezibalulekileyo.
Iimfuno ziqala ukusebenza nge-30 kaNovemba
Ukusukela nge-30 kaNovemba, uvavanyo lwe-COVID-19 lwemolekyuli alusayi kwamkelwa njengenye indlela yogonyo. Ukuba abahambi abakayiqali inkqubo yokugonywa, okanye bengaqalisi kwakamsinyane, abayi kuba nelungelo lokuhamba ukusuka nge-30 kaNovemba. Ulwazi olongezelelweyo luya kunikwa kwiiveki ezizayo.
Ukongeza, kuya kubakho amanyathelo otshintsho kubantu bangaphandle abangagonywanga abahlala ngaphandle kweKhanada kwaye bangene eCanada ngaphambi ko-Oktobha 30. Kuze kube yi-28 kaFebruwari, baya kukwazi ukuthatha indiza ngenjongo yokunduluka eCanada ukuba babonisa ubungqina bokuba uvavanyo olusebenzayo lwe-COVID-19 yemolekyuli ngexesha lokuhamba.
URhulumente waseCanada uya kuqhubeka esebenzisana nabachaphazelekayo abaphambili, abaqeshi, iinqwelomoya kunye nomzila kaloliwe, ii-arhente ze-bargaining, abantu bomthonyama, amagunya asekuhlaleni, kunye namaphondo kunye nemimandla ukuxhasa ukuphunyezwa kwemfuneko yokugonywa.